Tag: Zvemukati Kushambadzira | Martech Zone
Tag: Zvemukati Kushambadzira
Artificial intelligence (AI) iri kukurumidza kuita imwe yeanonyanya kufarirwa kushambadzira buzzwords. Uye nechikonzero chakanaka - AI inogona kutibatsira kuti tidzokorore otomatiki mabasa, kugadzirisa pachako kuedza kwekushambadzira, uye kuita sarudzo dziri nani, nekukurumidza! Kana zvasvika pakuwedzera kuoneka kwemhando, AI inogona kushandiswa kune akati wandei emabasa akasiyana, anosanganisira influencer kushambadzira, kugadzira zvemukati, social media manejimendi, inotungamira chizvarwa, SEO, kugadzirisa mifananidzo, nezvimwe. Pazasi, isu tichatarisa zvimwe zvezvakanakisa
6 Mutambo-Kuchinja SEO Mazano: Mabhizinesi Aya Akakura Organic Traffic kusvika zviuru makumi maviri + zveMwedzi Vashanyi.
Munyika yekutsvaga injini optimization (SEO), avo chete vakanyatsobudirira vanogona kujekesa izvo chaizvo zvinotora kukura webhusaiti yako kune makumi ezviuru zvevashanyi pamwedzi. Uhu humbowo hwepfungwa ndihwo humbowo hwakasimba hwekugona kwechigadzirwa kushandisa nzira dzinoshanda uye kuburitsa zvinoshamisa zvemukati zvinozomira. Nevazhinji vanozviti veSEO nyanzvi, isu taida kuunganidza rondedzero yeakanyanya simba mazano